I-Thrustmaster Y-300CPX Far Cry 5 Edition, sivavanye ezi ntloko zemidlalo kubathandi be-saga | Iindaba zeGajethi
Ukuba uyayithanda imidlalo yevidiyo siqinisekile ukuba awukutyeshelanga ukukhutshwa kokugqibela Khala kude 5, kwaye yintoni ongayikhumbuliyo kunee-headphone ezilungileyo I-Thrustmaster ukuthatha ithuba kuzo zonke izakhono ezijikeleze isandi esinokubonelela.
Yile ndlela esenza ngayo uqhakamshelwano lokuqala nezi headphone, ipakethe eyaziwayo, zonke ezi mveliso ezijongene nokwenziwa kweemveliso ezinikezelwe kubadlali abaninzi abazi kakuhle ukuba ungazifaka njani ngamehlo, yiyo loo nto thina inee-headphone ezikwibhokisi esele zisibonisile ukuba siza kubona ntoni ngaphakathi, ulwenziwo olupheleleyo lwe-Far Cry 5.
1 Izixhobo kunye noyilo: Ukukhala okuninzi 5
2 Iimpawu zobugcisa: Ebalaseleyo ngokuguquguquka kwayo
3 Uluvo lomhleli: Ezi ntloko zihambisa oko zikuthembisayo
Izixhobo kunye noyilo: Ukukhala okuninzi 5
Ii-headphone zinomxholo, uhlelo olukhethekileyo, nangona zenzelwe kuphela abathandi be-saga, kuba uyilo luyathandeka emehlweni nakwichukumisa. Yenziwe e polycarbonate mnyama, Sifumana iflegi yaseMelika yaseMelika kumacala omabini, kunye neebheji ezibhekisa kumdlalo wevidiyo ngaphakathi kweefowuni. Zombini ngaphambili nangasemva kwebhanti yentloko, kwindawo yomqamelo eza kugubungela intloko yethu, ibandakanya umbhalo othi "Far Cry 5" omhlophe, kwimeko apho usenakho ukuthandabuza ukuba bathetha ngantoni . Njengoko inkampani isilumkisa, banoyilo olwahlukileyo olungu- "Y" olo Iyilelwe ngokupheleleyo ukubonelela ngentuthuzelo egqithileyo ngenxa yezizathu ezibini: Iipads ezinkulu kunye nezithambileyo, kunye nokuzahlula ngokukuko. Uyilo lwefowuni nganye lwenza njengegumbi lokwenyani le-acoustic elonyusa i-bass. Ukuba uyazibuza malunga nokuzahlula kwee-headphone, impendulo endinokukunika ichanekile, isebenza kakuhle.
Iipads zikumgangatho kwaye ukutyabeka kwesikhumba okwenziweyo kwanele ukuqinisekisa ukuba kuya kuhlala ixesha elingaphezulu. Ngendlela efanayo, bayigubungela ngokupheleleyo indlebe, into esinceda ukuba singabinazintlungu ekusebenziseni ixesha elide. Iphakheji epheleleyo inika i-11.8 x 23.8 x 25 cm esitokisini phantse i-750 yeegram, nangona kuphela ii-headphones zinobunzima obungaphantsi, malunga ne-300 gram. Ngaphandle kwamathandabuzo baziva bekhululekile, iTrustmaster ithathele ingqalelo into yokuba siza kuchitha iiyure ezimbalwa sizenze ngobuninzi bazo, ngenxa yoko asinakulindela okungaphantsi kwimveliso yezi mpawu.
Iimpawu zobugcisa: Ebalaseleyo ngokuguquguquka kwayo
Sinabaqhubi ababini (inye ngendlebe) ye I-50 yeemilimitha (1,97 ″), engekho encinci ukuba sithathela ingqalelo ukhuphiswano. Banobuntununtunu obuyi-102 dB ngelixa benikezela isandi esibonakalayo kwi-7.1, into ethi zimbalwa ii-headphone ezikwaziyo ukuyiphumeza kwiinkqubo ezinjenge-PlayStation 4 kwaye iyaxatyiswa ngokunyanisekileyo kakhulu xa idlala imidlalo. Sineqhosha elingqonge eliQinisekisiweyo elidityaniswe kulawulo, njengakwezinye ii-headphone zezi mpawu.
Imakrofoni ayikude ngasemva, ayinamsebenzi, eyilelwe ukuhambisa ilizwi lakho ngokuchanekileyo, ukufezekisa olona nxibelelwano lusebenzayo kunye neqela lakho. Imakrofoni iyafumaneka kwaye iyahlengahlengiswa, Ukuziqhelanisa nobukhulu kunye nokumila kwentloko yomdlali, ngelixa unikezela ngokuchaneka kwe -50 dB kuxhomekeke kuphawu.
Iqhina lolawulo olunentambo Yiyo eya kusivumela ukuba silungelelanise iingeniso ngokuchanekileyo, zombini kwimakrofoni nakwisandi somdlalo. Ukongeza, kunokwenzeka njani ukuba ibe ngenye indlela, siza kuyenza isebenze okanye sisebenzise imakrofoni ngqo kwezi ndawo. Okokugqibela, asinakho ukungahoyi ukuba ezi ntloko zentloko ziyahambelana zombini iPlayStation 4 kunye neXbox One kunye nePC. Intambo, i-4 yeemilimitha ubukhulu kunye neemitha ezine ubude, ayizukuthintela ukuba nexesha elimnandi.
Uluvo lomhleli: Ezi ntloko zihambisa oko zikuthembisayo
Kunjalo Zilungile njengoko iTrustmaster ithembisileEwe, ii-headphone zibonelela ngesandi esigqwesileyo, nangona inye kuphela kodwa, malunga nee-euro ezingamashumi amabini ngaphezulu sele ufumene ii-headphone ezinamandla afanayo kodwa ngaphandle kwamacingo, nangona kunjalo, umgangatho kunye nokuphendula kwee-headphone ezinentambo kuhlala kungenakwenzeka ukuthelekisa. Yiba njalo, kwi LONTO ungazifumana, okanye ngokusebenzisa iwebhusayithi yeTrurthmaster.
I-Thrustmaster Y-300CPX Far Cry 5 uHlelo
Ulawulo kunye nohlengahlengiso
Ndivile ukuba idlala njani i-Far Cry 5 kunye ne-Call of Duty: Imfazwe yesibini yeHlabathi Kunye nabo, banikezela ngokusebenza ngokufana nemodeli esemthethweni ye-PlayStation 4 yeGolide, ngaphandle kokucaca ukuba sinentambo apha. Ndiyabacebisa ngomgangatho wabo, nangona benokubheja kuhlobo lwe-7.1, kuba bekwanayo nengoma yesandi yestereo, ethi nangona ilungile, umahluko kumgangatho wesandi esibonakalayo uyaqapheleka, ngaphandle kweerandi ezingamashumi amathathu zomahluko. Ke ngoko, sishiya ezi ndlela kunye nezimvo ukuze ukwazi ukuzenzela isigqibo malunga nokusebenza okwenyani kwezi ntloko, ukhetho oluhle kakhulu xa kuthelekiswa nolunye kwintengiso kunye nophawu oludumileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » I-Thrustmaster Y-300CPX Far Cry 5 Edition, sivavanye ezi ntloko zemidlalo kubathandi be-saga